China Carbon eriri ala Manufacture na Factory | Yan Tuo
The carbon eriri ọtụtụ ihe mejupụtara ala nwere obere erughị ala na obere inertia. Inertia ya bụ naanị 1/5 nke nke metal metal rollers, nke nwere ike ngwa ngwa Malite ma ọ bụ kwụsị;
Model Nke G-01 Corrosion na-eguzogide ọgwụ √
Agba Nwa Ọla Aluminom
Ibu ibu 15kg Elu 3k kenkowaputa / dị ka achọrọ
Ngwugwu Akwụkwọ igbe ， ụfụfụ ，Akwa akwa akpa Nkọwapụta 1500mm * 255mm * 234mm
Nbanye Weihai HS koodu 6815992000
N'oge na-adịbeghị anya, site na nwelitewanye nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ejiri nwayọọ nwayọọ mepụta ihe dị elu, arụmọrụ dị elu, obere carbon na nchebe gburugburu ebe obibi. The carbon eriri ọtụtụ ihe mejupụtara ala nwere obere erughị ala na obere inertia. Inertia ya bụ naanị 1/5 nke nke metal metal rollers, nke nwere ike ngwa ngwa Malite ma ọ bụ kwụsị; ngwa ngwa na-agba ọsọ ọsọ, ruo 70% ngwa ngwa karịa rollers metal omenala; obere deformation, ezi ike ọgwụgwụ na-eguzogide, ogologo ọrụ ndụ, otu oge ego na-eri karịa metal rollers, elu-okwu iji uru. Agbanyeghị, ihe nrụpụta nke carbon fiber rollers dịkwa oke elu, ma ọ bụ oke ziri ezi ma ọ bụ nguzo ya siri ike, wdg, ga-enwe mmetụta dị mkpa na arụmọrụ nke igwe niile.
Weihai Yantuo Composite Material Technology Co., Ltd., nke nyeworo ọnụ ọgụgụ buru ibu, ọkara na obere carbon fiber na-apụta maka ihe nkiri, akwụkwọ, batrị lithium, foils, akwa ndị a kpara akpa, mbipụta na ndị nrụpụta igwe ndị ọzọ, na-eweta ndị ahịa . N'otu oge dị ka uru ahịa, ọtụtụ ahụmịhe ngwa dị mkpa agbakọwokwa. Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ụlọ ọrụ anyị ahaziri nke carbon fiber rollers iji gosipụta ngwa ngwa nke carbon fiber rollers na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ：
Ngwa nke carbon fiber na-apụta na mpịakọta akwụkwọ na akwụkwọ ndị ọzọ, ihe nkiri, igwe mpempe akwụkwọ aluminom:
Na mmepụta nke mpịakọta akwụkwọ, nakwa dị ka ọtụtụ akwụkwọ, ihe nkiri, na aluminom foil ngwaahịa, obosara na akara ọsọ nke mpịakọta ngwaahịa n'oge mmepụta na nhazi ozugbo chọpụta mmepụta arụmọrụ na mmepụta àgwà nke dum ngwaahịa. N'otu oge ahụ, obosara Mmụba nke mmepụta ihe na mmụba na ọsọ ọsọ nwekwara mmetụta kpọmkwem na ọnụahịa mmepụta. N'ihe banyere ịrụ ọrụ dị elu nke dị elu, a na-ekpebi ogologo nke otu mpịakọta site na ọsọ ọsọ dị egwu nke mpịakọta. Oge dị oke egwu nke ala ahụ dị n'ụzọ dabara adaba na square nke ogologo ala, ogologo nke ala ahụ dị okpukpu abụọ, ọsọ ọsọ dị egwu wee bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mbụ.
Mgbe ogologo nke ala ahụ ruru ọkwa ụfọdụ ma chọọ ọsọ ọsọ dị oke mkpa, a chọrọ ka ihe a na-ahụ maka ya nwere modul dị elu. Na-agbanwe modulus nke carbon eriri mejupụtara mpịakọta bụ 240GPa, nke bụ ibu karịa nke ígwè na ọtụtụ Mkpa ọkụ na arọ. Ya mere, inertia dị obere, nke nwere ike belata oke esemokwu nke ngwaahịa ndị dị ka akwụkwọ mpịakọta na-arụ n'oge ọrụ, nke ka mma ijikọ ala na ije ọsọ ọsọ na ngwangwa ngwa ngwa ma ọ bụ ngagharị.
Nke gara aga: Faiba glaasi tube
Osote: carbon eriri telescopic osisi maka window ihicha osisi